Na-anakọta VOC (olu onye ahịa) iji nweta atụmanya ndị ahịa wee tinye QFD (mmepe ọrụ ọrụ) iji chọpụta njirimara ndị dị mkpa, kpalie echiche ịkọwapụta ya, mezue echiche mmepe site na njikarịcha echiche. 3D ịme ngosi uwe ka ọ dị ugbu a nwere nyocha FMEA na DFM. Nweta nkenke EPS ngwá ọrụ na agụụ akpụ ngwá ọrụ site na akụrụngwa dị elu gụnyere waya eletrik eletrik na CNC ọnwụ.
Mepụta mmetụta ụzọ map dị iche iche ọkọlọtọ, ebu liners na kwuru njupụta, jiri calibrated Cadex ule ngwaọrụ ime na-ụlọ ule site nkà lab oru. Nyochaa ihe nlereanya ọ bụla site na cert a ghọtara nke ọma. ụlọ nyocha
Mee nkuzi ọrụ na SOP (usoro eji arụ ọrụ) yana ịkọwapụta nrụpụta akọwapụtara. Mee Usoro njikwa atụmatụ iji hụ ogo dị elu. Jiri nlezianya lee anya site na scrum board, jiri nlezianya soro mmepe site na iji ndepụta OKR, nzukọ nkwụnye kwa ụbọchị na usoro eserese Gantt.
Were nnukwu ọrụ were azụmahịa nke ọ bụla n’oge na-eri ya.
Anyị na-elekwasị anya na nyocha ọhụụ na ọ bụghị naanị usoro nrụpụta dị elu kamakwa ihe ọhụụ na teknụzụ ọhụụ, na usoro nke akụkụ, anyị mepụtara akụkụ silicone nke a na-agbanye n'ime ngwongwo dị nro iji mee ka mpempe akwụkwọ na-amịkọrọ ike n'oge okuku ma chebe isi site na ịmetụta, obere ike silicone anaghị emetụta ntụsara ahụ ma debe jụrụ n'oge ịnya.
Biomaterial bụ ntinye anyị maka nchekwa gburugburu ebe obibi, ọ ghọrọ okwu na-ekpo ọkụ maka nkwado, anyị mepụtara ọtụtụ biomaterials (dị ka antibacterial, achara na ihe eji emegharị) iji belata ojiji nke mmanụ ọkụ.
Ejikọtara ọnụ na silicone.
Njirimara arụmọrụ dị elu.
OPtimized kwesịrị ekwesị
Chebe megide ụmụ nje na isi.
Kwadoro ma nwee ntụsara ahụ.
Njikwa mmiri mmiri.
Nọrọ na akọrọ n'efu.
TPU enweghị nkebi bonding.
Enweghị nsogbu bonding.
PC / eyi mkwado.
0.25mm - 0.5mm nri abalị mkpa PC bonding.
Kpụzi usoro ihe dị mma.
Slipping ọrụ enyere iwelata rotational mmetụta ike.
Gold eriri kpara webbing
3D mmetụta webbing
Yarn-ejiri kpara webbing
Recyclable polyester weebụ